» मिस नेपालमा नितिका कर्मचार्यको सम्भावना, मिस ग्ल्यामर बनाउन यसरी गर्नुहोस भोट
मिस नेपालमा नितिका कर्मचार्यको सम्भावना, मिस ग्ल्यामर बनाउन यसरी गर्नुहोस भोट
१८ बैशाख २०७६, बुधबार ०८:४८
हेटौँडा, १८ बैशाख । मिस नेपालको २५ औँ सँस्करणको फाईनल मे ९ तारिखमा गरिँदै छ । अहिले मिस नेपालका उत्कृष्ट २५ जना प्रतियोगीहरु विभिन्न विधाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । उत्कृष्ट २५ मा परेकाहरु मध्ये एक प्रतियोगी हुन् नितिका कर्माचार्य । ललितपुर इमाडोलकी नितिका कर्माचार्य २१ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले सोसल वर्कमा स्नातक गरेकी छिन् । यस अघि भएको ट्यालेन्ट राउण्डमा उनले ‘घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बज्यो’ बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् । काठमाडौँमा युवाहरुमाझ चर्चित र सक्रिय छवि बनाएकी नितिका मिस नेपाल २०१९ को कन्टेस्टेन्ट नम्बर ११ हुन् । उनी विगत ७ महिना देखि नेपाल इन्ट्रिगेटेड ब्लाइन्ड डेभ्लोमेन्ट एशोसिएसनमा समेत आवद्ध छिन् । लामो समयदेखि विभिन्न सचेतनामुलक कार्यक्रमको नेतृत्व समेत गर्दै आएकी नितिका समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मनोभाव राख्छिन् । उनले दृष्टिविहिनका लागी स्टार वियोण्ड द क्लाउड भन्ने प्रोजेक्टलाई समेत आफ्नो लक्ष्य बनाएकी छिन् । विशेष गरी दृष्टि गुमाएका बालबालिकाको लागि विभिन्न सिपमुलक तालिमहरु सञ्चालन गर्ने र दिर्घकालिन रुपमा उनीहरुको आर्थिक उपार्जनका लागी सहयोग पुग्ने अपेक्षा सहित उनी उक्त प्रोजेक्टमा काम गर्दैछिन् ।नितिका समाजसेवी हुनु मात्रै उनी मिस नेपालको दाबेदार हुनुको कारण होईन । यस बाहेक पनि उनमा मिस नेपाल हुनका लागि आवश्यक छविहरु छन् ।हेरौँ उनको बारेमा तयार पारिएको यो भिडियो–
उदाहरणका लागि उनी राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्छिन् । नृत्यमा बढि नै झुकाव भएका कारण उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा पनि नृत्य नै प्रस्तुत गरिन् । सन् २०१६ को मिस इ कलेजकी विजेता समेत भएकी उनी फ्रेस फेस २०१६ की विजेता समेत हुन् । राष्ट्रिय नाचघरमा भएको मिस ई कलेज प्रतियिोगितामा उनले १६ कलेजका प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै छैठौँ मिस ई कलेज बन्न सफल भएकी थिईन् । त्यस्तै उनले भारतमा सम्पन्न भएको ‘मिस एण्ड मिस्टर इण्डिया सब कन्टिेनेन्ट २०१७’ मा सेकेण्ड रनर अप समेत भएकी थिईन् । ग्ल्यामबर्ड इन्टरनेशनल दिल्लीले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगितामा परम्परागत पोषाक प्रदर्शनी, प्रश्न उत्तर राउण्ड, नृत्य प्रतियोगिता लगायतका प्रतियोगिता पार गर्दै उनी सेकेण्ड रनरअप भएकी थिईन् । उनका हरेक सफलतालाई उनकी आमाले समेत निकै महत्वका साथ दिँदै आएकी छिन् । उनकी आमा मिस नेपालको अडिसनको समयमा समेत उनलाई साथ दिन सँगै गएकी थिईन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा बर्जर मिस ग्ल्यामरको प्रतियोगिताको लागि समेत फोटो भोटिङ खुला छ । यदि तपाई नितिकालाई भोट गर्न चाहानुहुन्छ भने उनको भोटिङ लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ । तपाईँले लिंकमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ । उनको फोटोमा आएको लाईक, कमेन्ट र शेयरका साथै अन्य आधारमा उनी मिस ग्ल्यामर २०१९ समेत बन्न सक्छिन् । त्यतिमात्र होईन भोट गर्नेहरुमध्ये छानिएकाले मिस ग्ल्यामर २०१९ की विजेतासँग डिनरको अवसर समेत प्राप्त गर्नेछन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? के नितिका बन्न सक्छिन् यस वर्षको मिस नेपाल ? तपाईको विचार कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । उत्कृष्ट २५ मध्ये तपाईको विचारमा को बन्न सक्छिन् मिस नेपाल २०१९ ? यसको जवाफ पनि कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोलाई लाईक र शेयर गरिदिनुहोला र अन्य भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोला ।